Liverpool Waxa Ay Badisay Shantii Kulan Ee Ugu Horeysay Xilli Ciyaareedka Horyaalka Ingariiska - Maxaa Dhacay Labadii Jeer Kale Ee Ay Sidaasi Sameeyeen? | Laacib.net
Liverpool Waxa Ay Badisay Shantii Kulan Ee Ugu Horeysay Xilli Ciyaareedka Horyaalka Ingariiska – Maxaa Dhacay Labadii Jeer Kale Ee Ay Sidaasi Sameeyeen?
16-09-2018 Saed Balaleti 12
Waa shan kulan, shan guul iyo 15 dhibcood oo ay heshay kooxda Liverpool. Bilow aad u fiican ayay u tahay kooxda Jurgen Klopp.
Inkastoo Liverpool ay u soo dhacday kaalinta labaad ka dib markii ay Chelsea 4-1 kaga badisay Cardiff City laakiin waxaa aad loola dhacay qaabka ay Reds ku bilaabatay xilli ciyaareedkan.
Waxa ay ku bilowdeen guul 4-0 oo ay ka gaareen West Ham, waxaana tan iyo markaas ay garaaceen Crystal Palace (2-0), Brighton (1-0), Leicester (2-1) iyo haatan Spurs (2-1).
Laakiin ma ahan markii ugu horeysay ee ay Liverpool badiso shanta kulan ee ugu horeysa xilli ciyaareedka, xaqiiqdiina waxa ay badiyeen labo jeer kale. Laakiin halkee ayay ku dhameysteen labadaas jeer?
Hadaba aan eegno:
Ka dib markii ay badiyeen shantii kulan ee ugu horeysay xilli ciyaareedka, Liverpool waxa ay ku guuleysteen horyaalka xilli ciyaareedkii 1978-79.
Waxa ay sideed dhibcood kaga qaadeen horyaalka kooxdii difaacaneysay ee Nottingham Forest iyadoo waqtigaas guul kasta lagu helayay kaliya labo dhibcood.
Waxa ay aheyd koobkii seddexaad ee tababare Bob Paisley ee lix horyaal oo uu u qaaday kooxda Anfield ka dhisan.
Si kastaba, Liverpool waxaa wareega hore ee Koobka Horyaalada Yurub ku reebtay Forest, halka semi-finalka FA Cup ay guuldarro ka soo gaartay Manchester United.
Liverpool waxa ay ku dhameysatay kaalinta labaad iyadoo Arsenal ay horyaalka qaaday inkastoo ay badiyeen shantii kulan ee ugu horeysay xilli ciyaareedka.
Sideed guularro oo soo gaartay xilli ciyaareedkaas ayaa keentay in Reds horyaalka laga qaado, halka tababare Kenny Dalglish uu qof walba ka yaabsaday isagoo iscasilay bishii Febraayo.
Reds waxaa horyaalka looga qaaday todoba dhibcood inkastoo Gunners laga jaray labo dhibcood ka dib dagaal ay garoonka gudahiisa kula galeen Manchester United.
Sidaasi darteed, Liverpool waxa ay badisay shantii kulan ee ugu horeysay horyaalka labo jeer oo hore midna horyaalka ayay qaaday 1978-79 midna kaalinta labaad ayay gashay 1990-91.
Miyay ku celin doonaan sidii xilli ciyaareedkii 1978-79 oo horyaalka ma hanan doonaan mise waxa ay noqon doontaa sidii xilli ciyaareedkii 1990-91 oo kaalin labaad ayay ku dhameysan doonaan?
12 Fekradood ayaa laga dhiibtay warbixintaan
mustafe caano says:
17-09-2018 at 8:08 am
haa way qadayaan waayo qarash badan ayaa naadigan ku baxay waana maalingii ay sugayeen ..
Codka shacabka says:
17-09-2018 at 6:38 am
Bismalaah marka horeysa wxn halkaan kasalamayaa walalaheyga barnaamijka quruxda badan ee sportiga inoogu soo gudbiya luqada somaliga.
Marka xigta tagerayaasha kubada cagta meel kasta aad dunidda kajogtaan.
Aniga wxn ahay taageero MAN UTD ah mudo 15 sano ah.
Hadan fikradeyda kadhiibto liverpool horyaalka epl kuma guleysan 27 sano hadeyba kabadneyn tiradaan.
Runtii kubadda cagta waxkasta kafilo lkn lfc oo horyaalka loo caleemo saaray in mudo ah arki meysaan.lfc oo qaaday epl waxan kaga rajo weynahay SOMALIA oo israacday.
Hadaad lfc tageerto da’daaduna tahay 20 jir ilaa cunugaaga kabaaluqo misne kaguursado xitaa lfc qaadi kari meyso horyaalka.marka msf waxba idin qaadi mayaan ee riyada ka kaca reer looserpool.steven G ayaa meesha iskaga samray oo ilaa hada loo aqoonsaneyn ciyaaryahan tariiq kuleh horyaalka marka naga xishooda reer lfc kkkkkkkk.
Chelsea 5 ama 6 ayey korkiina ku qaaday sidokale city 2 ilaa 3 ayey qaaday idin meeye idinkuna kkkkkkkk.
Wxn xasusutaa sanadii aad u dhowateen inaad naga qadaan epl waxa idinla dagay DEMBE BA oo gerarrad siiyey kubad qurxooneyd iyo crysle palace hadana meelna gaari meysaan aniga oo aay iga jajabantahay baa idinka hormaraya sida last year kkkkkkk.
JECLIYAA JABKA LOOSERPOOL.
Shite mahammud says:
17-09-2018 at 4:35 am
Insha allaah leverpool way qaadayaan sandkan
17-09-2018 at 2:43 am
Maya gaalinta 2am3ayaay gudhameyandontaa,
Lkn weli madhameestirna,
17-09-2018 at 12:22 am
Haa way qaadi karaan sanadkan sidaan aminsa nahay
16-09-2018 at 10:02 pm
Haa lkn waxay kaga xidhantahay, in ay xamaasad degan ku ciyaarto, oo hubsiimo leh, dhana ay iska dhigtaa naadi walba oo ay laciyaarayso oo ku tallo gashaa in ay ka badiso. Haday koox yar tahay iyo haday koox wayn tahayba, min shaqaalle, min tababare, min musaacid, min taageero, min ciyaartooy waa in ay niyada galiyaan in ay ka go an tahay badis, markaas waxaa lagayaabaa in ay koobab qaado, waxa kalle oo muhiim ah in ay isku wada kalsoonaadaan min ciyaartooy min shaqaale, min tababare, taageerayaashuna waa in ay iska dhaafaan dacaayadaha laga soo lalinaayo, meelaha fog fog ee aan jeclayn in ay guulaystaan, waana in ay isku garab taagaan ciyaartoodooda, kani ahaan waan ku garab taaganahay waanaan ku kalsoonahay, min shaqaale, min mulkiile, min tababare, min ciyaartooy in aanu sanadkan dhul gariir aan caadi ahayn ku qaadno epl, Fa cub, carabal kaab, iyo champion leaguega,. Waanaan qaadi karnaa waxaan kalloo ku kalsoonahay ciyaartoga min gooliyeyaal, min difaac, min dhex, min weerar, min tababare, min shaqaale, min mulkiilayaal. waxaanaan inoo wadda rajaynayaa guulo taariikhi ah, insha alllah,
17-09-2018 at 3:28 am
Abti waad fcntahay lkn Min-ta kugu badane ma waxad tahay ciyaal mulcaamaded😂😂😂
Abib Ilghir says:
16-09-2018 at 6:34 pm
Inkasta oo aan taageero Man City, hadana waan jeclaan lahaa in sanadkaan ay qaadaan maadaama koox waayn oo muddo oomanayd ama qatanayd ay yihiin.
16-09-2018 at 5:25 pm
Ensha.allah haa liverpool sanadka wey ku guulaysanaysaa horyaalka
16-09-2018 at 5:23 pm
Haa dabcan sanadka liverpool wey ku guulaysanasaa
Moha Ck says:
16-09-2018 at 5:20 pm
insha Allh Sanadkan Liverpool
Ayaa iskale Horyalka Waayna badinaaysaa
16-09-2018 at 5:11 pm
horta ilahy ayaa og wixi dhicidona lkn ani wxn jeclahay inan arko Liverpool Oo Hanatay horylka wxana qaba inan sanadkan ciyrtod fican haysano